Welcome to Lannthit Journal - လမ်းသစ် ဂျာနယ်: အခမဲ့ လက်ဗွေနှိပ် မှတ်ပုံတင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေး
guide, tour » အခမဲ့ လက်ဗွေနှိပ် မှတ်ပုံတင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေး
အခမဲ့ လက်ဗွေနှိပ် မှတ်ပုံတင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေး
Posted by လမ်းသစ် on Thursday, August 18, 2011 in guide, tour |0comments
တရားမဝင်နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေသူများအတွက် ယနေ့ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီအထိ အောက်ပါလိပ်စာတွင် အခမဲ့ လက်ဗွေနှိပ် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး။ သတ်မှတ်ချိန် ကျော်သွားပါက ရင်းဂစ် ၃၅ ဖြင့် မှတ်ပုံတင်နိုင်ဦးမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမလေးရှားနိုင်ငံတွင်း မှတ်ပုံတင်ဝန်ဆောင်မှု ပေါက်ဈေးတွင် အသက်သာဆုံး နှုန်းထားဖြစ်သည်။ (အခြား မှတ်ပုံတင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းများတွင်မှု ဝန်ဆောင်ခ ရင်းဂစ် ၃၀၀ မှ ၁၃၀ အတွင်း ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။) မလေးရှားအစိုးရမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသော တရားဝင် မှတ်ပုံတင်နိုင်မည့် နောက်ဆုံး နေ့ရက်အထိ ၂၄ နာရီပတ်လုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် အလုပ်သမားခေါ်ယူရန် လိုအပ်နေသော အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များလည်း လာရောက်စောင့်ကြည့် နေမည်ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်နိုင်ခွင့်အတွက် ထောက်ခံရန် လုပ်ငန်းရှင် မရှိသေးသူများမှလည်း မိမိနှစ်သက်ရာလုပ်ငန်းသို့ ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး တစ်ပြိုက်နက်တည်း တရားဝင် မှတ်ပုံတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လိပ်စာ - TKT BAWAH, WISMA MIRAMA, JALAN WISMA MIRAMA, KL. (DEWAN BAHASA & PUSTAKA)
ဆက်သွယ်ရန် - 019 3476 173, 019 3875 682, 019 3562 083.
လမ်းညွှန်မြေပုံ - (ကလစ်နှိပ်၍ ပုံကြီးချဲ့ကြည့်ပါ)
Tags: guide, tour